(Qormo Xiisa Badan) Madaxda Cusub Ee Soomaaliya Loo Doortey Maka Dhabaa Mise Waa Ka Dhalanteed Nidaamka Federaliga
Nidaamkani waxa uu xanbaarsan yahay:-
Madaxweynaha waxaa hada soo shaacbaxaya inuu si toos ah u diido faderlisamka waayo waxaa uu dagaal aan gabaad lahayn ku hayaa hanaanka nidaam soo unkida ka socota Gobolada Jubooyinka iyo Gedo oo dadka halkaa degan ay mudo afar sanadood ah soo wadeen maanta oo gebo gebo u tahayna uu madaxweynu buur dheer iyo mid gaabanba u korayaa sidii uu uga saari lahaa habkan soomaali wada qaadatey oo isaga lagu soo doortey isla markaan kitaabka quraanka ah uu ugu dhaartey.
Hadaba maxaa la gud boon dadkii doortey nidaamkan federalisimka ah??????
War Taleefoonka naga qabo !Maqaal xiiso leh
War Taleefoonka naga qabo !: waa qormo aan ku qaadaa dhigi doono siyaabaha aan habbooneyn ee dadka qaarkiis ay u isticmaalaan Taleefoonka.
Nin Sheikh ah ayaa Masaajiid ka wacdiyey, wuxuu sheegay waxyaabo badan oo aan habbooneyn, isagoo midmid u dul-istaagay, markii uu ku sii dhow yahay gabagabo ayaa waxaa istaagay nin ka mid ahaa dadkii wacdiga Sheikha dhageysanayey, malaha ninka istaagay waxaa uu iska wada helay dhammaan tilmaamaha xun ee Sheikhu ka digayey. ninkii wuxuu u qaatay in Sheikha uu isaga si toos ah uga hadlayo, wuxuu cod dheer ku yiri ” Sheikhow aniga ayaad iga hadleysaaye maad si cad ii magacowdid?”..
Waxaan sheekadaas u soo qaatay in tilmaamaha qaarkood ee aan sheegi doono aanan cid gooni ah ula jeedin, haddiise qof iska dhex akhriyo, ama iska helo tilmaamaha aan xusi doono: sheekada ayaa ila soo gashay ee isaga uma jeedo, balse wixii aan habbooneyn ee jira in laga haro ayaa ila quman.
Akhriste raali ahow haddii aad xoogaa mashquushay, meel kalena u qaadatay inaan abbaaray, dulucda qormada hadda ayaan u galayaa.
Waxaa jira siyaabo aan qommaneyn oo dadka qaarkiis ay u isticmaalaan Taleefoonka, iyadoo arimahaasi aan midmid u dul is-taagi doono haddii Illaahay idmo.
Ma filayo in dadka oo dhan ay isku si’ u wada dhaqmi karaan, waxaana taas aan doonin Allihii uunkan abuuray, waxaana tix gelinteeda mudan sida loo kala caqli, cilmi, deggenaan iyo dhaqanba badan yahay, iyadoo ay inahaasi iyo kuwa kale oo badanba jiraan, ayaa hadana waxaa jira waxyaabo dadku ay isku raacsan yihiin inay fiican yihiin, iyo kuwa kale oo xumaantooda aan laga murmi karin.
Siyaabaha aan habbooneyn in Taleefoonka loo isticmaalo ayaa waxaa ka mid ah kuwan soo socda.
1- Ku celcelin taleefoon lagaa qaban waayey
2- Ku mashquulid taleefoon adoo akhiyaar la fadhiya
3- Ku hadlid taleefoon adoo cid kale la hadlaya
4- Cod kor u qaadid adoo ay dad kale kula joogaan ama kaa agdhow yihiin
5- Sir ka duubid qof aan baraarugsaneyn
6- Baarasho taleefoon cid kale leedahay
7- Hubsiino la’aan cidda aad la xiriireyso
8- Taleefoon ku wicid qof kuu muuqda.
Arimahaasi 8-da ah ayaan ku gaabsanayaa anoo in badan oo kale uga tagaya akhristaha qormadan.
Dabcan Taleefoonka waxaa loo isticmaalaa inuu kuu qabto shaqo kugu adkaan laheyd la’aantiis, waxaana qof walba oo isticmaala uu u wataa inuu cid uu dan ka leeyahay kala xiriiro, asagana laga helo marka ay cid kale dan ka soo yeelato, dantaasi ceynkii ay doontaba ha ‘ahaato, iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana mar walba qofka aad u baahan tahay aadan heli karin, waxaa dhacda in xiliyada qaarkood qofka aad Taleefoonkiisa garaaceyso uusan wadanin, waxaa kale oo suurowda in qofka uu markaas mashquul jira awgiis uusan qaban karin, waxaa kale oo laga yaabaa inuu markaasi diyaar u aheyn inuu qabto wax Taleefoon ah, sababtu sidii ay doontaba ha ‘ahaatee.
Haddii marka ay dhacdo in qof aad wacdo ka dibna uu kaa qaban waayo Taleefoonka, ma ahan inaad markaba meesha soo dhigato in ula kac lagaaga qaban waayey, iyadoo ay dhici karaan arimihii aan kor ku soo xusay, kuwa kalena ay jiri karaan. Marka haddii taleefoonka qofka aad dooneyso aad wacdo lagaana qaban waayo, ka dibna aad ku celiso hadana lagaa qaban waayo waxaa habboon inaadan isla markiiba caroonin ee aad qofka aad wacday waqti siiyo, haddii uu markaas kaa qaban waayo, mashquul jira awgiis, ama uusan wadanin, ama uusan markaas diyaar u aheyn inuu kula hadlo, ka dib marka uu soo diyaar garoobo ayuu kula hadli doonaa. Haddii ay jirto arin aan qofkaas looga maarmeyn oo deg-deg ah fariin ugu dir arinta aad kala hadli laheyd adoo soo koobaya.Sidoo kale waxaan habbooneyn inaad dhinac kale ka soo wareegto oo aad Taleefoon qof kale leeyahay aad ka wacdo, taasoo laga yaabo inay isku dhufato qofka aad Telkiisa isticmaaleyso iyo kan aad waceyso, waxaa kale oo aan fiicneyn inaad qofka ciriiri geliso oo aad si aan fiicneyn u daba gasho.
War Taleefoonka naga qabo!.
Soomaali ayaa waxaa uu wacay Soomaali kale oo ay saaxiibo ahaayeen. markaas Soomaaliga wax wacaya wuxuu haystaa firaaqo fiican, balse nasiib darro ma oga saaxiibkiis inuu sidiisa oo kale firaaqo uu kula hadlo heli karo, markii Soomaaligii wax soo wacay Taleefoonka laga qaban waayey ayuu carooday, ka dib wuxuu mar kale garaacay Taleefoonkii saaxiibkiis, mar kale ayaa laga qaban waayey, ilaa 7 jeer ayuu wacay, Soomaaligan Taleefoonka ku celcelinaya wuxuusan ogeyn in saaxiibkiis uu Taleefoonka guriga uga tagay si uu u jaj gareysto, ka dibna kii wax wacayey ayaa intuu xanaaqay wuxuu ugu dambeyn yiri ” war Taleefoonka naga qabo”. Akhristow adiga imisa jeer ayey arintan oo kale kugu dhacdaa?.
Akhristow marka ay dadi meel isugu yimaadaan waxaa jirta wax isu soo jiiday oo ay dadka isaga soo soocdeen, iyadoo ay sidoo kale tix-gelinteeda leedahay howsha ay isugu yimaadaan, hana hilmaalin in dadka wada jooga ay kala mudan yihiin Ixtiraam, iyadoo guud ahaanba dadka ay isku leeyihiin istix-gelin. iyadoo ay sidaasi tahay: ayaa haddana waxaa jira dad ku ibtileysan ku falaadidda Taleefoonka, waxaana arkeysaa dad iyagoo cid kale la fadhiya haddana ku masquulsan inay cid kale kala sheekeystaan Taleefoonka, waxaana ay taasi meel ka dhac ku tahay dadka meesha fadhiya, waxaana mudanku yahay in qofkii cid kale doonaya inuu la xiriiro ama Taleefoonkiisa kala sheekeysto uu meel cidla ah la tago, dadka kalena uusan caajis ku ridin sheekadoodana ka qasin. qodobkanna wuxuu ka mid yahay dhaqan aan fiicneyn oo dadka qaarkood ay leeyihiin.
Dhibicdan waxa ay uga duwan tahay tii hadda aan soo qeexay: in qofi uu cid kale la hadlo isagoo sheeko ku jira, ka dibna waxaa dhaceysa in qofkii la wacay uu Taleefoonka qabto, balse qofkan wax wacay ayaa wuxuu mashquul ku yahay sheekadiisii, waxaana qofkii la wacay uu Taleefoonka dhegta ku haynayaa isagoo sugaya inta qofka soo wacay uu kala hadlayo, xiliyada qaarna waxaaba dhacda inuu ku jaro, maadaama qofkii soo wacayba uu sheeko kale mashquul ku yahay. haddii ay sidaasi tahay waa laga habboon yahay in qof aadan waqti u haynin aad wacdid, waxaana sida dowga ah uu yahay: in marka aad qofka waceyso aad u soo jeeddo. Sidee ayey adiga kula tahay in aad la hadasho qof kaa sii jeeda? middanna waa la macne, marka si aadan jecleysateen in laguula dhaqmo dadka ha ula dhaqmin. Akhriste raali ahow haddii aan xoogaa arinta kululeeyey.
Dabcan qofka cidda uu la xiriirayo waxa uu u baahan yahay inay si wanaagsan isu fahmaan, taasna macnaheedu maaha inaan leys fahmi karin haddii aan kor loo qaadin codka, qofka lala hadlayo haddii kor loogu dhigo iyo haddii hoos loola hadlaba wuu ku maqlayaa, walow ay jiraan dad dhagaha ka culus oo aan hadalka fahmin in kor loogu qaado maahee.
Muhiim maaha mana wanaagsana in qofka aad Taleefoonka kala hadleyso waxa aad ka wada hadleysaan ay maqlaan dad kale, waxaana suurowda in waxa aad qofka kale kala hadleyso ayba adiga iyo isaga idin qarsoon yihiin. Sidoo kale waxaa dhacda in qofka kale ee aad la xiriireyso uusan jecleysaneynin in waxa idin dhexeeya ay cid kale ogaato. Haddii ay inahaasi iyo kuwa kale oo ka badanba jiraan: ma kula qumman tahay inaad sirahaaga oo dhan aad banaanka dhigto? haddiise adiga aadan kala jecleyn oo aad tahay qof furan sidee kuula muuqataa in cidda aad la hadleyso arin ayan jecleysaneynin ay la wadaagto cid kale oo laga yaabo inay xarash u hayso? qofka sababay in waxaasi oo dhan dhacaanna ay yahay adiga oo codkaaga xaafad shanaad laga soo maqlayo.
Haddii arinta barbar kale laga istaago: waxaan habooneyn in dad adiga kaa agdhow oo sheeko iyo howlo kale haysta ay ku mashquulaan sheekada aad cidda kale la wadaagto, adoo u fududeyn kara kana dheeraan kara inta aad Taleefoonkaaga soo dhameysaneysid. Soo xiritaanka qodobkanna wuxuu yahay: inay fiican tahay in codkaaga aad hoos u dhigto mar walba waa lagu maqlayaaye, dadka kalena aadan dhibin.
Dadka qaarkood waxa ay wataan Taleefoono wax lagu duubi karo, sawirona lagu qaadi karo, adeegyada wanaagsan ee uu Taleefoonkoodu leeyahayna waxaa habboon inay uga faa’iideystaan si wanaagsan oo wada dhaqanka suubban iyo shareecadaba ku wanaagsan.
Siyaabaha aan habbooneyn oo dadka qaarkood ay u dhaqmaan ayaa waxaa ka mid ah:
1-Inay sawiro ka qaataan cid aan u idmin
2-Inay duubaan sheeko qof qabar-daar ah, oo laga yaabo inuu cid kale wax ka sheegayo
3-Inay labadii arrimood ee aan kor ku soo xusay ka faa’iideystaan, ka dibna si wax badan kharibi karta u isticmaalaan.
Iyadoo ayan habbooneyn in cid kale la xanto ama wax laga sheego: ayaa haddana waxaan fiicenyn in dadka siraha loo kala qaado, sidoo kale waxaan fiicneyn qof wax uusan kuu idmin inaad ka qaadato ama sawir ha ‘ahaado, ama cod aad ka duubtay ha ‘ahaado, arimahaasi iyo kuwa kale oo ka badan ma ahan dhaqan wanaagsan iyo wax ay ogoshahay Shareecada Islaamka, in la joojiyo ayaana ay dantu ku jirtaa.
Taleefoonada waa qofka wehelkiisa, waxaana ugu jira wax uusan jecleyn in cid kale la ogaato, waxaasi intii ay doonayaan ha le’ekaadaane, mana filayo inuu jiro qof wax walba jecel in lala wadaago. Iyadoo ay taasi jirto ayaa dad badan waxaa lagu ibtileeyey jeclaanta ogaanshada siraha dadka kale leeyihiin, meel walba oo ay ka ogaan karaana darbi dheer iyo mid gaabanba u fuula.
Taleefoonada cidda kale leedahay si uun baa laga yaabaa inay gacanta ugu galaan dadka aan doonayo inaan dhaqamadooda daaha ka rogo, waxaa suurowda in qofka Taleefoonka lahaa uu u dhiibtay, waxaa kale oo macquul ah in qofkan falfal xumida maagan inuu codsaday in loo dhiibo. marka uu gacantiisa ku hubsado Taleefoonka ayaa waxa uu abbaarayaa inbox ka (sanduuqa) waxaa kale oo uu eegayaa halka laga diray fariimaha, si uu u ogaado wixii fariimo ahaa ee laga diray Taleefoonka. waxaa kale uu baarayaa keydka sawirada ku jira Taleefoonka. Arimaha uu baarayo oo dhan waa wax aan loo fasaxin, waxaa kale oo dhacda inuu lambaro aan loo fasaxin ka qorto Taleefoonka uu mashquulka ku hayey.
Arimahaas oo dhan iyo kuwa kale oo ka badan ma ahan wax ku habboon dhaqanka wanaagsan, sidoo kale waxaa mamnuucday Diinta Islaamka, waxaana jirta in marka guriga la galayo dadka la amray inay ogolaasho weydiistaan cidda ay u galayaan, sida Qur’aanka ku cad, sidoo kale waxaa la mamnuucay in xiliyada qaar guryaha dadka la booqdo, waxaas oo dhan waxaa loo sameynayaa: waa in aan guriga loogu tagin dad qabar-daar ah oo aan markaas diyaar u aheyn inay cid qaabilaan.
Soo afmeeridda dhibicdanna waxay noqoneysaa: dhaqanka noocaas ah waa mid iska horkeeni kara dad badan oo ay ka mid yihiin kan Taleefoonka baaranaya iyo kan xogtiisa la fatashanayo, sidoo kale waxay isku dhufan karaan dad kale oo labadiina iyo kuwa kaleba ay soo gali karaan, waxaas oo dhanna waxaa sabab u ah in qofi faraha la galo Taleefoon qof kale leeyahay, iyadoo ujeedadiisu ay tahay inuu wax xog ah ka ogaado qofkan iyo cidda uu xiriirka la leeyahay, xiriirkaasi ka noqdo nooc walba.Dadka Taleefoonadooda dadka kale u dhiibayana waxaa laga rabaa inay taxadaraan, haddii ay Taleefoonadooda ku jiraan wax ayan cid kale la dooneynna ay xifdistaan sirahooda si ayan hadhow uga shalaayin arin ayan waxba ka qaban karin.
Marka koowaad waxaa mudan in tooshka lagu ifiyo arimahan:
1- Magacyada Taleefoonkaaga ku jira waxaa ka mid ah kuwo ka bilowda xarfo isku mid ah
2- Dadka magacyadoodu Taleefoonkaaga ku jiraan isku si’ uma sheekeysataan
3- Dadka magacyadoodu Taleefoonkaaga ku jiraan waxaa jira kuwa aadan xili walba isla hadlin
4- Waxaa ka mid ah magacyada kuu liis gareysan: kuwa aydaan is aqoonin, si’ kastaba arintaasi ha ku dhacdee
Marka ay inahaasi iyo kuwa kale oo ka badanba jiraan waxaa mudanku noqonayaa in Taleefoonka aad garaaceyso ama aad fariinta u direyso aad si fiican isaga hubiso. markaas ka dib ayaad si furan ula xiriiri kartaa cidda aad dooneyso, ama fariin ugu diri kartaa, qoraha qormadanna ma ahan mid dhiirri gelinaya in dadka qaarkood sidii la doono loola hadlo, balse macnuhu waa: qof walba in la dajiyo booskiisa, iyadoo aan qofna lagu xadgudbeyn.
Wiil ayaa waxa uu doonayey inuu fariin u diro gabar uu xiriir ka dhexeeyey. markii uu qoray fariintiisii “dabcanna waad garaneysaa waxa ay isu qoraan laba qof oo xiriir lab iyo dhedig ah uu ka dhexeeyo”: ayuu wuxuu fariintiisii u diray habaryartiis, magaca gabadha uu fariinta u waday iyo kan habaryartiis ayaa isku mid ahaa waxa ay ku kala duwanaayeen magaca labaad. Fariintii ayaa waxa ay gaartay habaryartiis. Dabcan habaryartu waa fahmeysaa in fariintaan aan iyada loo wadin. ka waran haddii aad xaaskaaga u dirtid fariin aad gabar kale u wadday? sideese dareemi laheyd haddii aad laba qof oo aad kala qarineyso aad ilowshagaaga isku qalado?.
Arimaha noocaan oo kale ah ee dhaca aad ayey u badan yihiin, qof walbana waxaa suurowda inay mid u ‘eg ku dhacday, ama qof uu garanayo ay ku dhacday, xalkuna wuxuu noqonayaa in dadka Taleefoonkaaga ku jira aad hubiso marka aad la xiriireyso, waxaa kale oo aad u wanaagsan in dadka marka aad magacooda xareysaneyso aad ku calaamadsato tilmaan gaar ah. Tusaale ahaan Hooyo, Aabbe, Sheikh, Macalin,Xaaska iyo wixii la mid ah. Akhristow nin tuur leh sida uu u seexdo isagaa yaqaane adey kula jirtaa sidii aad isu ilaalin laheyd.
Akhriste aniga iyo adigaba waan ognahay in Taleefoonka loo wato inuu wax fududeeyo, waxaan kale oo hubnaa aniga iyo adiga in qofka kula jooga aad iska fahan ogtihiin qofka aad Taleefoon ku wada hadleysaan, waxaana tusaale inoo noqon kara in Taleefoonka aan dadka ka weydiino halka ay joogaan, waxa sidaas loo yeelanaya waxa ay tahay: in wax badan oo aan Taleefon lagu dhammeyn karin qofkaas lagala hadlo.
Haddii ay sidaasi jirto, muxuu noqonayaa macnaha ku jira in qof kuu muuqda oo codkaagu gaarayo inaad Taleefoonkiisa garaacdo?
Haddii aan Jawaabta ku soo dhawaado: waxay aniga ila tahay in qofka aad Taleefoonkiisa waceyso isagoo kuu muuqda uu yahay qof aad dooneyso inaad ogaato inuu Taleefoonka kaa qabanayo iyo in kale, taasna aniga ilama qumana, maxaa yeelay waa dabagal iyo xorriyad ka qaadid, qofkana ma wanaagsana in kharaarkiisa la raadiyo. Haddii qofkaas aad wacday uu Taleefoonka kaa qaban waayo si walbaba ha ‘ahaatee waxaa dhaceysa inaad cuqdad u qaaddo oo is-tiraahdo” waxa uu kaaga qaban waayey waa inuusan ku daneyneynin”, taas ayaa ugu yar waxa qalbigaaga ku soo dhacaya, mid kalena xisaabta ku darso inuu jiro Sheydaan dadka ka dhex-faa’iideysta oo buun-buuniya madmadowga soo kala dhex-gal. Hadaba sow adiga sabab uma tihid in waxaasi iyo wax ka daran ay dhacaan? maxaadse ku faleysaa in qof xummaantiis aad ogaato? dowguse sowma aheyn in leysu ceeb qariyo haddiiba ay ceebo jiraa? mase dhici kartaa in qofka aad tijaabineyso uu is-leeyahay saaxiibkaa hadhow wac marka aad soo firaaqowdo? Haddiise intaad waxaas oo dhan ka booddo oo meesha soo dhigato in lagu xummeeyey maxaa ka faa’iideysaa inaad lumiso qof qaali kugu ‘ahaa? iyadoo dowgu ahaa in saaxiibo wanaagsan la sameysto halka aad adigu kuwaagii hore qiil aad ku kala tagtaan u raadineyso.
Taleefoonada sida qalab wax badan inoo fududeeyey, laguna gaaray fududeyn Illaahay aadanaha wax badan u sahlay. haddii ay sidaasi tahayna waxaa wanaagsan in howlaha muhiimka ah lagu qabsado, isla markaasna ma ila habboona in qofka Taleefoonka isticmaalaha uu sabab u noqdo in wax badan ay halaabaan, ama kharibmaan.Qofka Taleefoonka isticmaalaha dadka kale ha ula dhaqmo sida uu isaguba jeclaan lahaan in loola dhaqmo. Haddii aad rabi laheyd in laguu cudur-daaro dadka u cudur-aad markaaga. Haddii aad jeceshahay in aan lagu daba-galin adna dadka ha daba-galin. Sidaas ayaa xiriirka u wanaagsan.
Halkan ayaan uga tagayaa qormadii warTaleefoonka naga qabo.